माओवादीमा २४२ जना केन्द्रीय सदस्य प्रदेशबाट, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडाैं | पुस १८, २०७८
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशबाट आउने केन्द्रीय सदस्यको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
२ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश भित्रबाटै समावेशी ढंगले केन्द्रीय सदस्य चयनको तयारी गरेको हो ।
७ प्रदेशबाट २ सय ४२ जना केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने छन् । सम्पर्क कमिटीबाट १४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने १५ प्रतिशत अर्थात ४३ जना मनोनयन हुनेछन् ।
प्रदेशमा रहेका प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र र गत निर्वाचनको समानुपातिक मतको रेसियोलाई आधार मानेर सदस्यको लागि कोटा छुट्टयाइएको हो ।
प्रदेश १ बाट ४१ जना, प्रदेश २ बाट २४ जना, बागमती प्रदेशबाट ५२ जना तथा गण्डकीबाट २४ जना केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने छन् ।
यस्तै लुम्बिनीबाट ४०, कर्णालीबाट ३१ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट २९ जना केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने भएको छन् । बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् ।
निर्वाचन समितिले सोमवार मतदान गर्नेगरी संशोधित निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरेपनि सहमतिमै केन्द्रीय सदस्य चयनको तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि मतदानमार्फत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने भनिएकोमा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेर बन्दसत्र चलिरहेको हो ।
पाल्पा बस दुर्घटना अपडेटः मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो
भरतपुर महानगर : रेनुले बढाइन् अग्रता, कसको मत कति ?
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले अग्रता बढाएकी छन् । बुधवार बिहानसम्ममा २४,३८५ मतको गणना हुँदा रेनुले ८ हजार ६२३ मतसहित अग्रता लिइरहेकी हुन् ...
राजेन्द्र लिङ्देनको पालिकामा राप्रपाको जीत
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पालिकामा जीत हात पारेको छ । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा राप्रपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका हुन् । पालिका प्रमुखमा ६ हजार ८५६ म...
२१ वर्षकै उमेरमा गाउँपालिका अध्यक्ष
फिनल्यान्ड र स्विडनले नेटोमा जोडिनका लागि दिए निवेदन
मधेशमा नेकपा एसको दोस्रो जीत, सखुवानान्कारकट्टीमा २६ मतले विजयी
रुपन्देहीमा एमालेले खोल्यो खाता